Misy olona tsy tia sarimihetsika frantsay mihitsy kanefa aleoko indray sarimihetsika frantsay toa izay ry "Rajao mianakavy". Maninona tokoa ary ry Rajao raha manao sarimihetsika tsy voatery hisy miaramila, gidragidra sns e. Matetika tery vay manta be ilay "scenario" fampihomehezana. Ny tantara izay nankafizin'ny Malagasy anie dia ny tantara nandraisandry Vahandanitra sy ry Clara sy ry Solofo José anjara e. Tantara tsy be pitsopitsony e. Mety hoe misy polisy nefa tena manaintaina tokoa. Raha ireny na tahaka ireny ve no atao an-tsarimihetsika tsy hahaliana? Fa asanareo moa io dia izay ataonareo.
Misy sarimihetsika frantsay mahafinaritra. Tahaka ny mamaky boky mihitsy ianao mijery azy ary tsy vetivety dia adino ilay tantara. Dia angamba anisan'izany ity "Une rencontre" ity.
Amin'ny lafiny teknika dia misy maromaro an'itony hoe "effets invisibles" itony ilay sarimihetsika. Izany hoe tsy dia tena voamariky ny mpijery loatra nefa tena namboarina. Anisan'izany ity sombiny nalaiko ity.
Raha fintinina dia nahafinaritra... ka rariny raha nahazo anjara-toerana teto amin'ny blaogiko.
Fehezan-teny anakiray nanintona ahy tao anatiny ny hoe "Ny fihaonana tena maharitra dia ilay fihaonana tsy nanomboka mihitsy" :-)